ကုန်ကြမ်း Letrozole (Femara) အမှုန့် (112809-51-5) hplc≥98% | AASraw
/ ထုတ်ကုန်များ / ရာခိုင်နှုန်းမူးယစ်ဆေးဝါး / Letrozole (Femara) အမှုန့်
SKU: 112809-51-5. အမျိုးအစား: ရာခိုင်နှုန်းမူးယစ်ဆေးဝါး
AASraw CGMP စည်းမျဉ်းများနှင့် trackable အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအောက်မှာ Letrozole ၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမိန့် (Femara) အမှုန့် (112809-51-5) မှဂရမ်ကနေပေါင်းစပ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှငျ့အတူရှိ၏။
Letrozole (Femara) အမှုန့်ကိုဗီဒီယို
Letrozole (Femara) အမှုန့်ကိုအခြေခံဇာတ်ကောင်
ပွိုင့်အရည်ပျော်: 181-183 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
စတီရွိုက်သံသရာအတွက် Letrozole (Femara) အမှုန့်သုံးစွဲမှုကို
generic အမည်: letrozole (သမင်ဒရယ် zol စေ)
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်များ: Femara (CAS 112809-51-5)
(Femara အမှုန့်) Letrozole အမှုန့်အသုံးပြုမှု
အထွေထွေလမ်းညွှန်အဖြစ်ငါ 0.36 မီလီဂရမ် / ထိုကဲ့သို့သော 200-300 မီလီဂရမ် / ရက်သတ္တပတ် testosterone ဟော်မုန်းအဖြစ် aromatizable steroids ၏ကျိုးနွံငွေပမာဏနဲ့ဟို Steroid တစ်မျိုးသံသရာတစ်အခြေစိုက်စခန်းငွေပမာဏအဖြစ်နေ့ကအကြောင်းကိုအကြံပြုပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သော 750 မီလီဂရမ် / သီတင်းပတ်အဖြစ်ပိုမိုမြင့်မားထိုးမှာ, ဒီပမာဏကိုပုံမှန်အားဖြင့်နှစ်ဆလိမ့်မည်။ အသွေးတော်စမ်းသပ်ခြင်းပင်အဆင့်မှာသညျ့မွငျ့မား estradiol ပြသထားတယ်မဟုတ်လျှင် 1 / နေ့ mg ထက်ယေဘုယျအားဖြင့်နောက်တဖန်မယူသင့်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်မရှိသလောက်ကိစ္စပါပဲ။
(Femara အမှုန့်) Letrozole အမှုန့်အပေါ်သတိပေး
ကသွေးဆုံးပြီးသားအမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုယ်ဝန်ရှိဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဖွယ်ရှိမဟုတ်ဖြစ်သော်လည်း Femara တစ်ဦးမွေးသေးသောကလေးထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျကိုယျဝနျဆောငျသို့မဟုတ် maybecome ကိုယ်ဝန်ဆောင်လျှင်ဒီဆေးဝါးကိုယူမထားပါနဲ့။ သငျသညျဆေးကုနေစဉ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖြစ်လာလျှင်ချက်ချင်းသင်သည်အတိတ်သွေးဆုံးမဟုတ်လျှင်ထိရောက်သောမွေးဖွားထိန်းချုပ်မှုကိုသုံးပါနှင့် tellyour ဆရာဝန်။
ဒါဟာ letrozole နို့သို့ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးသူနာပြုကလေးထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့ဆိုပါကဖြတ်သန်းရှိမရှိမသိရသည်။ သငျသညျ Femara သုံးပြီးချိန်မှာသင်ရင်သား-feed ကိုမပေးသင့်ပါတယ်။
အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများဆေးညွှန်းများနှင့် over-the-counter ဆေးဝါးများ, ဗီတာမင်နှင့်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များထုတ်ကုန်အပါအဝင် letrozole နှင့်အတူအပြန်အလှန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ယခုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်အားလုံးဆေးဝါးနှင့်သင်စတင်ရန်သို့မဟုတ်သုံးပြီးရပ်တန့်မဆိုဆေးဝါးနှင့် ပတ်သက်. သင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူတစ်ဦးချင်းစီပြောပြပါ။
Letrozole / Femara ကုန်ကြမ်း Powder (CAS 112809-51-5)
(Femara အမှုန့်) Letrozole အမှုန့်စျေးကွက်
IV ။ Femara အမှုန့် (CAS 112809-51-5) ဝယ်ဖို့ကဘယ်လို: AASraw ထံမှ Letrozole အမှုန့်ကိုဝယ်?
AAS ကုန်ကြမ်း injuection အသုံးပြုမှုများအတွက်ကာယဗလသို့မဟုတ်မြေအောက်ဓာတ်ခွဲခန်းများမှသန့်ရှင်းစင်ကြယ် 98% Letrozole / Femara ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ဖြစ်သည်။
Letrozole / Femara ကုန်ကြမ်း Powder ချက်ပြုတ်နည်း